I-Recipe Orange Coffee
Ukuphuza ikhofi Ngesinye isikhathi kuhle ukuqala usuku ngendebe yekhofi esanda kuphuzwa. Umuntu othanda ikhofi esheshayo, othile ukhetha ikhofi nge-chicory, othile uthenga ikhofi e-Colombi ephakeme. Ngiphakamisa ukuthi uzame ukwenza ikhofi elimnandi nge-flavour elimnandi ye-orange. Le khofi ivuselela, ivuselele futhi isize ukuvuka kalula.
I-Orange 100 g
Ikhofi elisha elisencane 2 tsp.
Isinyathelo 1 Ukwenza ikhofi yase-orange sidinga ikhofi esemhlabathini, amanzi, orange, ushukela.
Isinyathelo 2 Finyisa isigamu se-orange ngaphandle kwejusi.
Isinyathelo 3 Ikhofi eneshukela isetshenziselwa isidlo esifanelekile, uthele amanzi kanye nomlilo omkhulu ulethe ngamathumba, kodwa unganikibili - thumela okwesibili kokugcina ngaphambi kokubilisa. Vala isembozo semasekhondi angu-30.
Isinyathelo 4 Engeza ijusi le-orange elisha elifakwe ekhofi bese ukhonza ngokushesha.
I-Lenten ikhekhe elifushane
I-cocktail yase-Classic ne-champagne
Ukuzalwa kukaMariya oNgcwele Obusisiwe - ngumuphi ngo-2016 usuku. Umlando, izimpawu nemithandazo yeholidi lesonto
Udokotela ohlinzekwa udumo uJaroslav Susak
Isobho se-Broccoli neshizi
Ama-biscuits e-classic we-ginger
I-cottage cheese mini casseroles ne-ubisi oluphefumulayo obilisiwe
Uhlu lwamaphilisi aphansi aphansi kakhulu: injabulo ngaphandle kokulimaza kumuntu
Ukuhamba kwababelethi kubafundi
Isizathu se-osteochondrosis nokuphathwa kwayo